Banggood တွင် OnePlus 5T အပေါ်အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေး Androidsis
Banggood တွင်အထူးလျှော့စျေးဖြင့် OnePlus 5T ကိုရယူပါ
ဒီကျဆုံးခြင်းအတွက်ထူးခြားသည့်ကိရိယာတစ်ခုမှာ OnePlus 5T ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ရပ်တည်လိုသောဈေးကွက်သို့ရောက်လာသည်။ ၎င်းမှာကိရိယာတစ်ခုပါ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် specs ပြီးတော့ဒါကအရမ်းကိုရောင်းဖို့အကုန်ရှိတယ်။ ဖြည့်စွက်ကာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားသောဖုန်းများထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည် စျေးကွက်က။
ဒါပေမယ့်ဒီ Banggood တွင်ပြုလုပ်ထားသောဤအထူးအရောင်းမြှင့်တင်မှုကြောင့်စျေးနှုန်းကိုပင်လျှော့ချနိုင်သည်။ လူကြိုက်များတဲ့စတိုးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ အထူးသီးသန့်လျှော့စျေးဖြင့် OnePlus 5T ၎င်း၏နှစ်ခုဗားရှင်း၌တည်၏။ သော်လည်း, ဒီကန့်သတ်မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုပြောပြမလဲ။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း \_ t နှစ်ခုဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့ကြသည် ကိရိယာမှစျေးကွက်သို့။ သူတို့ထဲကတစ်ခု6GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှု ပြည်တွင်းရေး။ အခြားရှိပါတယ်နေစဉ် 8 GB RAM နှင့် 128 GB သိုလှောင်မှု ပြည်တွင်းရေး။ နှစ် ဦး စလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ယခု Banggood သည်ကျွန်တော်တို့ကို OnePlus 5T ၏မူကွဲနှစ်ခုနှင့်လျှော့စျေးယူလာပေးသည်။
1 OnePlus 5T (8GB RAM - 128GB Storage) - လျှော့စျေး $ 53,6
2 OnePlus 5T (6GB RAM - 64GB Storage) - လျှော့စျေး $ 50,49
OnePlus 5T (8GB RAM - 128GB Storage) - လျှော့စျေး $ 53,6
မြှင့်တင်ရေးအတွက်ပစ္စည်း၏ဗားရှင်းနှစ်ခု၏ပထမ ဦး ဆုံးတစ် ဦး နှင့်အတူတစ်ခုဖြစ်သည် တိုးမြှင့် RAM ကိုနှင့်ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်။ ဒီဗားရှင်း OnePlus 5T သည်အားကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေပြီးဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများအတွက်နေရာပိုများတဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဖုန်းကိုသုံးတဲ့သုံးစွဲသူတွေဖြစ်ရင် များစွာသောဓါတ်ပုံများကိုယူသို့မဟုတ်စီးရီးစောင့်ကြည့်ဤဗားရှင်းအတွက်အလောင်းအစားလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
El မူရင်း OnePlus 5T ၏မူရင်းတန်ဖိုးမှာ ၆၆၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အခုသင်ယူနိုင်တယ် 616,39 ဒေါ်လာ။ ဤစျေးနှုန်းမှအကျိုးခံစားရရန်အောက်ပါတို့ကိုအသုံးပြုရမည် လျှော့ကုဒ်: 12BGOP5TTG ။ သင်ကမြန်ရန်လိုသော်လည်း၎င်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသောမြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိရိယာ ၁၀၀ ပဲရှိတယ် ရရှိနိုင် ထို့အပြင်သင်၌ရှိသည် ဒီဇင်ဘာလ 8, နောက်ဆုံးနေ့အထိ။ သင်အဲဒါကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
OnePlus 5T (6GB RAM - 64GB Storage) - လျှော့စျေး $ 50,49
ကိရိယာ၏အခြေခံအကျဆုံးဗားရှင်း၊ ဤအခြေခံကိစ္စတွင်၎င်းသည်ကိရိယာသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤကတည်းကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကြီးစွာသော option ကို OnePlus 5T သည်ယခုနှစ်စျေးကွက်တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စွမ်းရည်လျော့နည်းပြီးသိုလှောင်မှုနိမ့်ကျသော RAM ရှိသည်။ ဆက်ပြီးပေမယ့် အံ့မခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကမ်းလှမ်း ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေအတွက်နေရာလွတ်တွေပိုများတယ်။
El မူရင်း OnePlus 5T ၏မူရင်းတန်ဖိုးမှာ ၆၆၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ယခု, Banggood အပေါ်ဤမြှင့်တင်ရေးကိုကျေးဇူးတင်ပါကတစ် ဦး မှရရှိနိုင်ပါသည် 510,50 ဒေါ်လာ၏စျေးနှုန်း။ ဤဈေးနှုန်းဖြင့်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ယူရန်သင်ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရမည် လျှော့ကုဒ်: 12BGESOP5T64 ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ပါတယ် ယူနစ် 400 ကန့်သတ်။ သင်အထိအချိန်ရှိသည် ဒီဇင်ဘာလ 8။ ထွက်မသွားပါစေနဲ့! သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာဝယ်ပါ.
အဆိုပါ OnePlus 5T အပေါ်ဤအပေးအယူယာယီဖြစ်ကြသည်ဒါကြောင့်သင်မြန်မြန်လုပ်ရမယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုမလွတ်မြောက်စေပါနဲ့။ သို့သော်ဤ Banggood သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ နာမည်ကြီးစတိုးဆိုင်ပြီးသားရှိပါတယ် ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခရစ္စမတ်အဘို့ပြင်ဆင်ကြ၏။ ဒါကြောင့်လက်ဆောင်တွေ ၀ ယ်ရတာဟာအရမ်းလွယ်ကူပြီးဈေးလည်းမကြီးပါဘူး။ သင်၌ဤဆိုင်၌ရရှိနိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်းပိုမိုစစ်ဆေးနိုင်သည် link ကို. ဒီကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Banggood တွင်အထူးလျှော့စျေးဖြင့် OnePlus 5T ကိုရယူပါ
ခရစ္စမတ် GIFS ကိုသင်၏မျက်နှာများနှင့်မည်သို့အခမဲ့ဖန်တီးရမည်နည်း။
Android Oreo Go - နိမ့်ကျသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် Android ဗားရှင်း